Yekutenga Bhegi, Supermarket Bhegi, Grocery Bhegi - LGLPAK
LGLPAK™ inogadzira, kunze kwenyika, uye inopa mhando dzese dzekudzivirira, dzinochinjika kurongedza & zvigadzirwa zvemumba zvinoraswa. Isu tinogadzira
* Yakazara huwandu hwePolyethylene Shopping Bags.
* Mapurasitiki echikafu anoshandiswa mumamiriro akasiyana, senge Kicheni, Firiji, Manheru nezvimwe.
* Saizi dzese dzemabhegi emarara ekushandisa pamba, zvitoro, chipatara zvichingodaro.
* Zvinhu zvinoraswa zvinosanganisira epurasitiki cutlery, tafura, yekubikira, yekudzivirira zvinhu nezvimwe.
* Yakasiyana siyana Poly kurongedza zvinodiwa zvakagadzirwa
* Baekeland (LGLPAK-bio-projekiti) inopa iyo inogadzikana uye eco-hushamwari sarudzo dzezvinhu zviri pamusoro.
* Professional tsika mazano
Zvese zvirevo zvinogona kugadzirwa
Multi Ruvara Kudhinda Supermarket Plast ...
Disposable diaper Sack-Nappy Bhegi
Bvisa Chikafu Bhegi PaRoll
HDPE Chikafu Bhegi Mune Akasiyana Ruvara
DZVANYA PANO IZVI ZVEMAZAMUZO
Kuti uwane mahara emahara, ndapota siya email nesu, isu tichava nekuonana mumaawa makumi maviri nemana.
HDPE nhema t-saga mabhegi
HDPE nhema t-saga mabhegi ndizvo zvinhu zvinonyanya kufarirwa mumisika yese. Masheya ari epakati saizi uye nhema dema pasina kudhinda. Gamuchirai vatengi vese vauye kuzobvunza. Tinogona kuve nechokwadi chepamusoro mutengo.
Mutsetse PP dzakarukwa mabhegi
Stripe pp dzakarukwa mabhegi anozivikanwa mumisika dzese uye unoshandiswa zvakanyanya mukutenga, nzvimbo dzekurima zvichingodaro. Mucheka wakasimba uye chitarisiko chakanaka zvinoita kuti vatengesi vanopisa.
Bvisa mabhegi echikafu
Bvisa mabhegi echikafu ndizvo zvigadzirwa zvakakosha zvekurongedza chikafu, senge, mvura, furawa, mafuta, tudyo nezvimwe. Izvo zvisina-chepfu, zvisina hwema uye zviri pachena maficha zvinoita kuti ichi chigadzirwa chive chinozivikanwa nyeredzi chigadzirwa.
Round midziyo saizi yemafurati mabhegi inogona kuwanikwa uchishandisa Denderedzwa (C), Dhayamita (D), uye Hurefu (H) yemudziyo ...
Imbwa POOP BAG
Chinhu chakakosha chigadzirwa kune vanhu vane mhuka dzinovaraidza Diki saizi, yakapusa kutakura Shandisa zvinoderedzwa zvinhu zvekuchengetedza nharaunda, nekunhuwirira.
Yakagadzirirwa Kuwedzeredza Nyaradzo Inowanikwa mune mbiri yakavhurika kumashure uye kuzere kufukidza Kuputsa Dhizaini yekubvisa nyore
Perfect chinotsiva PVC Magorovhosi Chipfeko uye Nitrile Magorovhosi Chipfeko! Iyo yakanyanya kukwikwidza yakaderera mutengo! Yakawanda huwandu hwezvinhu!
Kudhinda tekinoroji inoendesa iyo inki kumusoro kwepepa, machira, mapurasitiki, dehwe, PVC, PC nezvimwe zvinhu kuburikidza nekugadzira ndiro, inking, kumanikidza uye zvimwe zvinyorwa senge zvinyorwa, pictur ...
Mira pamapfudzi ehofori uye enga ... 21-08-19
Iyo yekugadzira tekinoroji yepurasitiki inochinjika yekupakata indasitiri yakave yakakura pamwe nemakore ehunyanzvi. Sezvo isu tese tichiziva, kufuridzirwa firimu ndiyo yekutanga nhanho mukugadzirwa kwepurasitiki firimu. Sekutakurika kurongedza ...
Kushumira vatengi, hatisi kungotaura chete 21-08-13
LGLPAK LTD. yagara ichitarisa kushandira vatengi nemoyo wese sechinangwa chayo, izvo zvinongoda kwete chete sevhisi maitiro, asiwo hunhu hwakanakisa hwehunyanzvi; kana zvisina kudaro kushandira vatengi kunozoita nemaune ...